लक`डाउनका बेला भारत बाट नेपाल आएको ट्र`कमा भेटियो १ क`रोड भा`रु !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/लक`डाउनका बेला भारत बाट नेपाल आएको ट्र`कमा भेटियो १ क`रोड भा`रु !!
लक`डाउनका बेला भारत बाट नेपाल आएको ट्र`कमा भेटियो १ क`रोड भा`रु !!
विराटनगर– लक`डाउनका समयमा अत्याव`श्यक बस्तुको ढुवानी गर्ने भन्दै भारतबाट नेपाल आएको ट्र“कबाट १ करोड भन्दा बढी भारतीय रुपैयाँ (भा`रु) बरा`मद भएको छ ।
मोरङको रानी (विराट`नगर) भन्सार नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्न लागेको डब्लू`बी–७३–ई ७६३५ नम्बरको ट्र`कबाट १ करोड ९ लाख ८९ हजार ५ सय ३० भारु बरा`मद भएको सशस्त्र प्र`हरी बलका के`न्द्रीय प्रवक्ता डी.आई.जी. प्रविन कुमार श्रे`ष्ठले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार एकीकृत भन्सार जाँच चौकी प्रवेश गर्ने क्र`ममा चेकजाँच गर्दा ट्रकमा एउटा कार्टुनमा हालेर लुकाइएको अवस्था`मा भारतीय रुपैयाँ फेला परेको थियो ।सशस्त्र प्र`हरीले भारतीय रुपैयाँसहित २ जनालाई पनि पक्रा`उ गरेको छ ।
पक्रा`उ पर्नेमा ट्रकका चालक रवि कुमार र सह-चालक पप्पु छन् ।सशस्त्र प्रह`रीका प्रवक्ता डी.आई.जी. श्रे`ष्ठका अनुसार बयानका क्र`ममा ट्र`कका चालकले आफू भारतको सुपौ`लबाट आएको बताएका छन् ।
आफूहरु विराटनगर बाट वाइ`पर लोड गरेर पुनः भारतको सिल`गुडी फर्किने गरी आएको पनि चालकले बयानमा बताएका छन् । सश`स्त्र प्रहरीले बरामद भएको भारतीय रुपैयाँ सहित दुवै जनालाई भन्सार कार्या`लयको जि`म्मा लगाएको छ ।